साताका ब्लगर : सामान्य आफ्ना विचार, भावना, लेख, रचना ब्लगिङ गर्नेलाई आचारसंहिता आवश्यक छैन : देविका घर्ती मगर
दाङकी देविका घर्ती मगर विगत ९ वर्ष देखि पत्रकारिताको क्षेत्रमा कार्यरत छिन् । कापी उद्योगमा काम गर्दा गर्दै बाध्यताले पत्रकारितामा लागेकी देविकाको अहिले रहरको पेशा भएको छ पत्रकारिता । स्नातकसम्मको अध्ययन पुरा गरेकी उनलाई फोटोग्राफीमा विशेष रुचि छ । घुम्दै फोटो खिच्न, लेख्न र पुस्तक पढ्न मन पराउँछिन देविका । महिलाका सवाल, पर्यटन र संस्कृतिका विषयमा लेख्न रुचाउँने उनी ब्लग लेखनमा पनि सक्रिय छिन् ।
हीबार , ३ असार २०७२ १:१७ पम पढेकाहरूबाट हेपिएकी पूर्वसभासद् शान्ता चौधरी (३५) ले कक्षा ८ मा नाम लेखाएकी छन्। 'भाँडा माझ्दा–माझ्दै संविधानसभामा आएकी', पहिलो संविधानसभामा नेकपा (एमाले) बाट समानुपातिक सभासद् चुनिएपछि लक्ष्मीपुर–४, दाङकी शान्ता चौधरीले पाएको पहिलो प्रतिक्रिया यही थियो। संसद्मा उनी प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिकी सभापति समेत बनिन्। नपढेकी सभासद् भन्दै हेप्नेहरूमा कतिपय सभासद् पनि थिए। अनि शान्तालाई लाग्थ्यो, 'पढे–लेखेकी भइदिएको भए हेपिनुपर्ने थिएन।'
in Himal Khabarpatrika, 14-20 June DEVIKA GHARTI MAGAR
Shanta Chaudhary never went to school because she was forced to becomeaKamlari (girl-child indentured labourer) at the age of eight. After being freed, she became an activist, working for the rights of landless farmers and to abolish Kamlari culture.
साताका ब्लगर : सामान्य आफ्ना विचार, भावना, लेख, रच...